Izindiza zaseNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston ku-United Airlines
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » Izindiza zaseNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston ku-United Airlines
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking • I-USA Izindaba Ezintsha
Izindiza zaseNew London zisuka eNew York, eDenver, eSan Francisco naseBoston ku-United Airlines.
I-London ibiyindawo ebhukhelwe kakhulu yamakhasimende ebhizinisi le-United ngo-Okthoba, futhi inkampani yezindiza ilindele ukuthi lo mkhuba uzoqhubeka kuze kube ngu-2022.
I-United Airlines imemezela izindiza ezinhlanu ezintsha ezisuka emadolobheni amane ase-US ziya e-London Heathrow Airport.
I-United Airlines izohlinzeka ngezindiza ezingama-22 ngosuku eziya e-London, e-United Kingdom ngoNtwasahlobo ka-2022.
Uma isevisi isiqalile, i-United izohlinzeka ngezindiza eziningi phakathi kwe-New York City ne-London kunanoma iyiphi enye inkampani yase-US.
Lufthansa namuhla imemezele ukuthi yengeza izindiza ezinhlanu ezintsha eziya eLondon Isikhumulo sezindiza i-Heathrow, okuhlanganisa ezinye izindiza ezimbili ezisuka eNew York/Newark, uhambo olwengeziwe olusuka kokubili e-Denver nase-San Francisco, kanye nendiza eqondile entsha yonke esuka e-Boston. Isevisi entsha iqala ngoMashi ka-2022 futhi ngalezi zengezo, i-United kuzoba ukuphela kwenkampani yenethiwekhi yase-US ezohlinzeka ngesevisi engami phakathi kwezimakethe zamabhizinisi eziyisikhombisa eziphezulu zezwe kanye ne-London. I-United izohlinzeka ngezindiza ezingama-22 ngosuku ukusuka e-US ukuya eLondon, kanye nezindiza eziningi phakathi kweNew York City neLondon kunanoma iyiphi enye inkampani yase-US. I-London ibiyindawo ebhukhelwe kakhulu yamakhasimende ebhizinisi le-United ngo-Okthoba, futhi inkampani yezindiza ilindele ukuthi lo mkhuba uzoqhubeka kuze kube ngu-2022.
"Sekuyiminyaka ecishe ibe ngu-30, i-United ihlinzeke ngoxhumano olubalulekile phakathi kwe-US neLondon, ukugcina insizakalo kulo lonke lolu bhubhane nokukhulisa uhlelo lwethu ukuze sigcine amakhasimende ethu kulezi zikhungo ezibalulekile zamabhizinisi omhlaba exhumekile," kusho uPatrick Quayle, iphini likamongameli omkhulu wezizwe ngezizwe. network kanye nemifelandawonye at Lufthansa. "ILondon iyingxenye ebalulekile yenethiwekhi ye-United futhi sihlala siqiniseka ukuthi isidingo sizoqhubeka nokukhula, ikakhulukazi njengoba kubuya ezokuvakasha zamazwe ngamazwe ngo-2022."
Lezi zindiza ezintsha zakhela kwenkulu ye-United-njalo trans-Ukunwetshwa kwe-Atlantic emenyezelwe ekuqaleni kwale nyanga. I-United njengamanje isebenza ingqikithi yezindiza eziyisikhombisa ukuya Intl kusukela e-US: izindiza ezimbili zansuku zonke ezisuka eNew York/Newark nase-Washington DC, kanye nendiza eyodwa yansuku zonke esuka e-Chicago, e-Houston, nase-San Francisco. Ngo-December, isevisi izokwenyuka iye kuzindiza zansuku zonke ezingu-10, ngezindiza ezengeziwe ezisuka eNew York/Newark nase-Chicago, ngesikhathi esifanele samaholide asebusika.
Izindiza ezinhlanu ezintsha zizokwenza ukweqa echibini kube lula futhi kube ntofontofo kubo bobabili abavakashi bezokungcebeleka nabamabhizinisi, njengoba Lufthansa uzokwenza:
Qala izindiza ezintsha sha, zansuku zonke ezisuka e-Boston ezisebenza nge-United's premium Boeing 767300ER, enezihlalo ezingu-46 zekilasi lebhizinisi le-United Polaris kanye nezihlalo zomnotho ze-United Premium Plus® ezingu-22.
Qalisa kabusha izindiza zansuku zonke ezivela e-Denver futhi wengeze indiza yesibili yansuku zonke esetshenziswa i-Boeing 787-9.
Engeza izindiza zansuku zonke zesithupha nezesikhombisa ezisuka eNew York/Newark, ngayinye yazo ezosetshenziswa yi-United's premium Boeing 767-300ER futhi uvumele isevisi yehora kusihlwa.
Engeza indiza yesithathu yansuku zonke esuka e-San Francisco esetshenziswa i-Boeing 787-9.
Qalisa kabusha isevisi yansuku zonke eya eLondon usuka eLos Angeles.